आज बिहिबार, यसरी रिझाउनुहोस वृहस्पतिलाई : – Suchana Hub
आज बिहिबार, यसरी रिझाउनुहोस वृहस्पतिलाई :
काठमाण्डौ । हिन्दुशास्त्र अनुसार मानिसले कुनै कार्य गर्दा बार हेरेर कुन बार के कार्य गर्दा ठिक हुन्छ वा कुन बार के गर्दा ठिक हुँदैन भनेर गर्ने गर्दछ्न्। जसले धर्मशास्त्रबारे थाहा भएको हुन्छ त्यो व्यक्तिले कुनैपनि कार्यगर्दा शास्त्र अनुसार कुनबार के कार्य गर्दा ठिक हुन्छ त्याे जानेर गर्ने गर्दछ । धर्मशस्त्रले भन्छ कुनै कुनै कार्य गर्दा जुनसुकै बार गर्नु हुँदैन । यसरी गर्न नहुने बारमा ती कार्यहरु गरेमा अशुभ हुन्छ, जिवनभर समस्या आईरहन्छ र जिवनमा दुःख पिडा भईरहन्छ ।
हिन्दु शास्त्र अनुसार बिहिबारको दिन केहि कार्य गर्दा शुभफल मिल्छ भने केहि कार्य गर्दा अशुभ फल प्राप्त हुन्छ । शास्त्रले कुन कार्य गर्न हुने र कुन कार्य गर्न नहुने भनेर भनेको छ त? ती कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ : हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार बिहिबार के गर्दा लाभ हुन्छ ?
ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
बिहिबारको दिन लक्ष्मी नारायणको दिन मानिन्छ । यस दिन पुजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन । पुजा गर्दा लक्ष्मी नारायण दुवैको पुजा सँगै गर्नु राम्रो हुने मान्यता रहेको छ । यसले पतिपत्नि बीचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
Previous सपनामा विवाह भएको देख्नुभयो भने के हुन्छ ?
Next धनी बन्ने गुणले भरिपूर्ण यी चार राशी